Bitcoin Debit Kaadị FAQ - Bitcoin E Si Nweta Kaadị Comparison 2018
Gịnị bụ a bitcoin debit kaadị?
A bitcoin debit kaadị bụ a visa ma ọ bụ MasterCard na i nwere ike iji ịzụta ngwaahịa na ọrụ site na online na offline ụlọ ahịa ma ọ bụ ịdọrọ ego ATMs. N'otu oge ahụ ọ na-na kụziri site na bitcoin ego. Bitcoin debit kaadị ka ihe dị mfe ịnweta emefu cryptocurrency ego n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Olee ụdị bitcoin debit kaadị dị?
The plastic bitcoin debit kaadị anya dị ka ihe nkịtị visa ma ọ bụ MasterCard nke i nwere ike iji otu ụzọ. The mebere bitcoin debit kaadị nyere online na otu nkọwa dị ka a ọkọlọtọ debit kaadị. The Onye Nwe Kaadị aha, ụbọchị nke Mmebi na CVC / CVV codes na-nyere n'elu iji, ma ọ dịghị phsyical mmepụta-eme ka ọ dịkwuo mfe na ngwa ngwa iji nweta ego.
Olee otú m pụrụ iji a bitcoin debit kaadị?
Ị nwere ike iji a bitcoin debit kaadị dị nnọọ ka ọ bụla prefunded debit kaadị. I nwere ike na-emefu nke itule nke na kaadị ịzụ ngwaahịa na ọrụ na obodo na ụlọ ahịa ma ọ bụ na online echekwa. Ọ bụrụ na ị nwere a plastic bitcoin debit kaadị, ị pụrụ ịdọrọ ego site ATMs. I nwekwara ike iji gị bitcoin debit kaadị ịzụrụ ma domestically na mba.
Gịnị bụ ego m nwere ike iji a bitcoin debit kaadị?
Bitcoin debit kaadị esetịpụ dị ego na fiat ego n'akụkụ bitcoin. The kasị ewu ewu na ego na-USD, EUR na GBP. The ego nwere ike ịtọ dị ka ndabere ego na njikọ aka bitcoin debit kaadị ego, otú ahụ ka azụmahịa mụụrụ na kaadị na-owụt ke na ego. Di na Nwunye nke na enye emeghe bitcoin debit kaadị ahịa ka n'ihu ego nakwa. Otu n'ime ndị ọzọ, na enye na-awade bitcoin debit kaadị na ndabere ego na-ete, CNY, JPY, KRW, AUD na CHF. Ụfọdụ na enye nwekwara nhọrọ ego na kaadị altcoins nakwa n'akụkụ bitcoin.
Olee otú m pụrụ ịtụ a bitcoin debit kaadị?
Iji nwere a bitcoin debit kaadị, ị ga-aha na otu n'ime ndị na enye 'n'elu ikpo okwu. Ndebanye usoro na-agụnye inye nkọwa nke Onye Nwe Kaadị, dị ka aha, ụbọchị ọmụmụ na ebe nke residency. The nyere ọmụma ga-ahụ ga-kwupụtara na a foto ID na a gosiri na nke obibi. Nke a pụrụ ịbụ a ụgwọ nwere adreesị nke caldholder. Mgbe ịtụkwasị wee na ị na-ahọrọ na mbupu usoro-a plastic kaadị na-anapụta gị home. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a virtual kaadị, kaadị nkọwa na-agbala gị email address. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ịkọrọ, i nwere ike ịtụ amaghị onye dere bitcoin debit kaadị enweghị nkwenye.
Nwere m Ike a bitcoin debit kaadị enweghị nkwenye?
Ee. Amaonye bitcoin debit kaadị dị na di na nwunye nke na enye na ahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka na-aga site nkwenye usoro nke na-enye foto ID na àmà nke obibi, ị nwere ike họrọ amaghị onye dere bitcoin debit kaadị. Ke idaha Otú ọ dị ya uru arịba ama na ókè na ọdabara maka unverified ọrụ na-mgbe na ala tụnyere kwupụtara ọrụ. Ya mere naanị ole na ole nke ego nwere ike ga-eji na ndị na-amaghị aha bitcoin debit kaadị n'ọnọdụ naanị inye a aha na-egosipụta na kaadị.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji nweta a bitcoin debit kaadị?
The plastic bitcoin debit kaadị na-enyere site na visa ma ọ bụ MasterCard na ọ na-ewe banyere 2-3 izu-enweta ha. The ego nke oge iji nweta na kaadị dabere na anya n'etiti kaadị na-eweta na Onye Nwe Kaadị. N'ihi na ihe mmezi ụgwọ awara awara nnyefe nwere ike họrọ ihe niile nke na enye. Na nke a na kaadị na-anapụta n'ime 2-5 azụmahịa ụbọchị na ọrụ site na DHL tinyere a nsuso nọmba.
Olee otú m pụrụ elu elu a bitcoin debit kaadị?
I nwere ike elu elu na bitcoin debit kaadị ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ karịa bitcoin. Ị nwere ike iji ụlọ akụ nnyefe, n'aka ma ọ bụ debit kaadị na ọzọ ugwo na enye dị ka Neteller na Skrill. N'ọnọdụ ka ukwuu Otú ọ dị PayPal abụghị n'etiti nabatara ugwo usoro ruru ya usoro na ọnọdụ.
Olee otú m pụrụ ịdọrọ ego a bitcoin debit kaadị?
I nwere ike ịdọrọ ego a bitcoin debit kaadị yiri ụzọ ka ị kwajuru na akaụntụ. Ị nwere ike izipu bitcoins ọzọ adreesị. I nwekwara ike ịdọrọ na ego a akụ ma ọ bụ na onye ọzọ na ugwo na-eweta, dị ka Skrill ma ọ bụ Neteller. N'ọnọdụ ka ukwuu Otú ọ dị PayPal abụghị n'etiti nabatara ndọrọ ego usoro bitcoin debit kaadị.
Enwere m ike ịdọrọ ego ATMs na a bitcoin debit kaadị?
Ee. I nwere ike ịdọrọ ego ATMs n'ụwa nile iji a plastic bitcoin debit kaadị.
Ole a bitcoin debit kaadị na-eri?
The ahịa nke bitcoin debit kaadị na-mgbanwe gafee na enye. The otu oge issuance na-eri nke a plastic bitcoin debit kaadị bụ n'etiti 5-25 USD. The issuance eri nke mebere bitcoin debit kaadị nnọọ obere, ị pụrụ ọbụna inwe ya maka free na n'ebe ụfọdụ. N'akụkụ otu oge mmepụta na-eri nke kaadị, a kwa ọnwa akaụntụ mmezi ego a na ebubo na ego nke 1 USD kwa ọnwa.
Gịnị bụ azụmahịa na-akwụ ụgwọ jikọtara a bitcoin debit kaadị?
Azụmahịa na-akwụ ụgwọ nke bitcoin debit kaadị na-mgbanwe n'ọtụtụ ebe, ndị ọzọ dị oké ọnụ kaadị nwere ike nta azụmahịa ụgwọ. Itinye kaadị na-abụkarị n'efu, mgbe withdrawals ebubo dabeere na ụdị ị họrọ. The naa na online zụrụ nwere ike ebubo na a ofu ego ma ọ bụ na a prorata pasent. Igwe ndọrọ ego withdrawals ebubo n'etiti 1.5-2.5% kwa azụmahịa, mba withdrawals efu ọzọ. E na-ego translation ego a na ebubo ma ọ bụrụ na ndabara ego adabaghị na azụmahịa ego.
Gịnị bụ ókè nke a bitcoin debit kaadị?
Mgbe ụfọdụ e nwere karịa ego nke enweta ego i nwere ike mara na a bitcoin debit kaadị. Nke a metụtara ego ole i nwere ike iwepụta na kaadị na kwa ego nke ego i nwere ike ịdọrọ si ATMs. Kwupụtara ọrụ nwere elu ókè na nwekwara ụfọdụ ndị na enye awade na-akparaghị ókè bitcoin debit kaadị maka edebanyere ọrụ. The ndụ topup na-ejedebeghị na gburugburu 2000 USD maka amaghị ọrụ.
Gịnị bụ igwe ndọrọ ego ndọrọ ego ụgwọ jikọtara a bitcoin debit kaadị?
Bitcoin debit kaadị enye ebubo ụgwọ mgbe wezụgara ego si ATMs. Nke a na ego nwere ike ebubo kwa azụmahịa ma ọ bụ prorata. The anụ ụlọ igwe ndọrọ ego withdrawals na-emekarị na-eri na gburugburu 1.5%, mgbe mba igwe ndọrọ ego withdrawals na-ebubo na 2.5%.
Gịnị bụ ego translation ego jikọtara bitcoin debit kaadị azụmahịa?
Ego translation ego a na ebubo bụrụ na ndabere ego nke akaụntụ metụtara na bitcoin debit kaadị dị iche iche tụnyere ego nke azụmahịa. Ke idaha a ofu 3% ego translation ego na-boro ebubo site niile nke na enye na ahịa.